यस्तो आयो बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको पोस्टमार्टम रिपोर्ट – Jagaran Nepal
यस्तो आयो बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको पोस्टमार्टम रिपोर्ट
काठमाडौँ । चर्चित बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको मृ’त्यु सास थुनिएर भएको देखिएको छ। उनको मृ’त्यु झु’ण्डि’एका कारण सास बन्द भएर भएको देखिएको हो। सुरुवाती जाँच रिर्पोटमा उनको मृ’त्यु कुनै प्रकारको नसालु पदार्थ दिएका कारण भएको नदेखिएको स्रोतलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।
राजपूतको आज मुंबईमा अन्तिम संस्कार गरिने तयारी थालिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। मुम्बईको बान्द्रास्थित एक्लै बस्दै आएका राजपुत आइतबार झु’ण्डि’एको अवस्थामा फे’ला प’रेका थिए। बालाजी टेलिफिल्मसका टेलिचलचित्रहरूबाट लोकप्रियता हासिल गरेका राजपुतले ३४ वर्षको कलिलै उमेर संसार छाडेका हुन। उनी बलिउडका चर्चित कलाकार मानिन्छन्।
के कारणले आत्महत्या गरे भन्ने विषयमा केही नखुले पनि उनी लामो समयदेखि डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। उनले आमिर खानको ‘पिके’ ‘एमएस धोनी’, ‘काइपे चे’, ‘केदारनाथ’ लगायतका सिनेमाहरूमा अभिनय गरेका छन्। उनले मर्नुभन्दा केहि हप्ता अगाडी इन्स्ट्राग्राम तथा कविताबाट आफ्नो दिवंगत आमालाई निकै नै हृदयविदारक तरिकाले सम्बोधन गरेको पाईएको छ ।
इन्स्ट्राग्राममा अन्तिम पटक (जुन ३) मा उनले आफ्नो र आमाको फोटो राख्दै क्याप्सनको रुपमा भावुक स्टाटस् लेखेका थिए । उनले स्टाटस्मा यस्तो लेखेका थिए : आँशुका थोपाहरुबाट वाष्पीकरण मुस्कानका लागि लालायित कहिल्यै अन्त नहुने सपनाहरु र एक क्षणभर जीवन यी दुई बिच सम्झौता गर्दै…माँ
यसैगरी उनले कविता पनि लेखेका थिए । उनले कवितामा यस्तो भनेका थिए : ‘जबसम्म तपाई हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, अब तपाईको स्मृतिमा मात्र म जिवित छु, छायाँ जस्तो, केवल झझल्कोमा मात्र । यो सुन्दर छ, यो सँधैको लागि हो…’
उनले टेलिभिजनमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा पनि आफ्नो आमाको सम्झना गरेका थिए । उनले सन् २०१६ मा ‘एम एस ध्वनी’ चलचित्रबाट बेस्ट याक्टर अवार्ड पाएका थिए । उनले यस अवार्ड पाउने क्रममा भनेका थिए ः “मैले यो सफलता हासिल गर्दै गर्दा मैले मेरो आमालाई सम्झिरेको छु । कास यदि मेरो आमा अहिले यहाँ हुनुभएको भए कति खुशी हुनुहन्थ्यो होला, म अहिले जे छु उहाँकै कारणले छु”
पछिल्लो समयमा उनले ‘दिल बेचारा’ नामक चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए । यो नै उनको अन्तिम चलचित्र भएको छ । ३४ वर्षीय राजपुतले फिल्म ‘काइ पो चे’ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेका थिए।
फिल्ममा आउनुअघि उनी टेलिश्रृंखलामा काम गर्थे। सन् २००८ मा स्टारप्लसको ‘किस देशमे है मेरा दिल’ बाट टिभीमा डेब्यु गरेका उनले जिटिभीको ‘पवित्र रिश्ता’बाट निकै चर्चा पाएका थिए। टिभीका विभिन्न कार्यक्रममा देखिँदै आएका उनी सन् २०१३ मा ‘काइ पो चे’ फिल्ममा देखिए। यही फिल्मबाट उनी ‘फिल्म फेयर अवार्ड फर बेस्ट मेल डेब्यू’ मा मनोनित पनि भए।
त्यही वर्ष उनले ‘शुद्ध देशी रोमान्स’ मा काम गरे। सन् २०१५ मा ‘डिडेक्टिभ बोमकेश बक्षी’ मा देखिएका उनले सन् २०१६ मा भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीको बायोपिकमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरे। ‘एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’ का लागि उनले उनी ‘फिल्म फेयर अवार्ड फर बेस्ट एक्टर’ मा पनि मनोनित भए। यसबीच उनी ‘रब्ता’, ‘केदारनाथ’, ‘सोनचिरिया’, ‘ड्राइभ’ देखिए।
सन् २०१९ मा रिलिज उनको फिल्म ‘छिछोरे’ पनि व्यवसायिक रूपमा सफल भयो। यही वर्ष उनको फिल्म ‘दिल बेचारा’ पनि आउँदै थियो। उनको सात वर्षे फिल्मी करिअरका तीन वटा राम्रा फिल्मको सूची यहाँ राखिएको छ, जुन युट्युबमा हेर्न सकिन्छ।
काइ पो चे (२०१३) निर्देशक: अभिषेक कपुर
‘काइ पो चे’ चेतन भगतको चर्चित उपन्यास ‘थ्री मिस्टेक्स अफ माइ लाइफ’ मा आधारित फिल्म हो। यसमा तीन जना साथीको मित्रता र ‘प्यासन’को कथा देखाइएको छ। फिल्ममा इशान भट्ट (सुशान्तसिंह राजपुत), ओमकार शास्त्री (अमित साध) र गोविन्द पटेल (राजकुमार यादव) मुख्य भूमिकामा छन्। तीन मित्रको एउटै सपना हुन्छ- खेलकुद पसल र क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्ने।
यी तीनमध्ये एक जनाले अंकलसँग ऋण माग्ने, अर्काले हिसाब-किताबको जिम्मेवारी सम्हाल्ने काम गर्छन्। पूर्व जिल्लास्तरीय क्रिकेटर इशान युवाहरूलाई क्रिकेट सिकाउने काम गर्छन्। उनीहरूको काम र जीवन ठिकठाक चलिरहेको हुन्छ। तर सामाजिक राजनीतक घटनाक्रमले उनीहरुको वर्षौंको मित्रता र काममा संकट ल्याउँछ।
सन् २००० आसपासको परिवेश समेट्ने यो फिल्ममा २००१ को भुइँचालोदेखि २००२ को गुजरातको धार्मिक जातीय दंगासम्मका सन्दर्भ जोडिएको छ।
‘काइ पो चे’ निर्देशन, कथा, अभिनय, स्क्रिनप्ले र संगीतका लागि प्रशंसा पाउन सफल फिल्म हो। यही फिल्मबाट सुशान्तले टेलिभिजनको दुनियाँबाट सिनेमामा प्रवेश गरेका हुन्। समीक्षकहरुबाट प्रशंसित यो फिल्ममा उनको अभिनयको पनि विशेष तारिफ भएको थियो।
एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी (२०१६), निर्देशक: नीरज पान्डे
महेन्द्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेटका सम्भवतः सर्वाधिक सफल र लोकप्रिय क्याप्टेन हुन्। आफ्नो नेतृत्वमा उनले क्रिकेटका सबै खाले ठूला प्रतियोगिता जितेर इतिहास रचेका छन्। ‘एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’ उनै सफल क्रिकेटरको जीवनका महत्वपूर्ण घटना समेटिएका छन्। धोनीको भूमिकामा सुशान्तको अभिनय छ।
२०११ मा श्रीलंकाविरुद्धको विश्वकप फाइनल खेलमा धोनीले युवराज सिंहलाई नपठाएर आफैं मैदानमा उत्रेका थिए। यो फिल्मको आरम्भ विश्वकप २०११ को त्यही सन्दर्भबाट हुन्छ। धोनीको खेल जीवन र निजी जीवनका कथालाई सँगसँगै देखाइएको यो फिल्मले त्यसपछि दर्शकलाई तीन दशकअघिको समयमा पुर्‍याउँछ। उनको जीवनमा परिवार, साथीसंगीदेखि प्रशिक्षकको भूमिकाको महत्व पनि देखाइएको छ।
गरिब परिवारमा जन्मेर भारतको क्याप्टेन बन्दासम्मको यात्रा समेटिएको यो फिल्ममा धोनीजस्तै देखिन र क्रिकेटरको भूमिका निर्वाह गर्न सुशान्तले गरेको मेहनत उनको अभिनयमा झल्किन्छ। फिल्मलाई यथार्थपरक बनाउन निर्देशकले धोनीको जीवनसँग जोडिएका ठाउँमै गएर छायांकन गरेका छन्। यस फिल्ममा सुशान्तबाहेक किआरा आडवाणी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दिशा पटानी आदि मुख्य कलाकारको अभिनय छ।
क्रिकेटमा रूचि नभएका धोनी कसरी यसतर्फ आकर्षित हुन्छन् देखि चर्चित हेलिकप्टर सटको नामाकरणसम्मका कथा देखाइएको व्यवसायिक रुपमा सफल फिल्म सुशान्तको करिअरको महत्वपूर्ण फिल्म हो। उनको घरपरिवार र रोमान्स समेत देखाइएको यो फिल्मले क्रिकेट वा खेलकुद मनपर्ने र मन नपराउने दुवैखाले दर्शकलाई बाँधेर राख्छ।
छिछोरे (२०१९), निर्देशक: नितेश तिवारी
यो फिल्मको कथा अनिरुद्ध पाठकका छोरा गौरवबाट सुरू हुन्छ। कलेज टपर आमाबुबाका सन्तान गौरव इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन्। अभिभावकजस्तै टपर बन्ने सपना पालेका उनी सोचेजस्तो रिजल्ट नआएपछि आत्महत्याको प्रयास गर्छन्।
यो घटनापछि बल्ल ‘छिछोरे’को मूल कथा सुरू हुन्छ। यो कथा फ्ल्यासब्याकमा देखाइएको छ। यो कथाले गौरवका बुवाआमा (सुशान्तसिंह र श्रद्धा कपुर) र उनीहरूका साथीसंगीको जीवनका रमाइलो र संघर्षका पाटो समेटेको छ। विद्यार्थीकालको होस्टल जीवनका उज्याला-अध्याँरा पाटो देखाइएको यो फिल्ममा कलेजकालीन र्‍यागिङ, बुलिइङ, मित्रता र प्रेमका कुरा रोचक तरिकाले देखाएको छ। यसमा धनी र गरिब विद्यार्थी बीचको वर्ग भेद र प्रतिस्पर्धा पनि देख्न पाइन्छ।
यसअघि ‘दंगल’ फिल्म बनाएका निर्देशक नितेश तिवारीको यो फिल्मले आधुनिक शिक्षा, व्यवसायिक परीक्षा र त्यसको परिणामले विद्यार्थी जीवनमा ल्याउने मानसिक तनावको चित्रण गरेको छ। फिल्ममा सुशान्त कलेज पढ्ने युवा र छोराको बुवाको परिपक्व दुई फरक हुलियामा देखिएका छन्। संकोची र बोल्ड दुवै खालको भूमिकामा सुशान्तले राम्रो अभिनय गरेका छन्।
व्यवसायिक र समीक्षक दुवैको नजरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुल्न सफल यो फिल्मले आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने सन्देश बोकेको छ। तर विडम्बना छोरालाई आशावादी बनाउने चरित्र निर्वाह गरेका उनै सुशान्तले आ’त्मह’त्याको बाटो रोजे। पर्दाभित्रको चरित्र र वास्तविक जीवनबीच कस्तो नमिलेको विरोधाभास !
मधुलाई विबाह गर्नुअघि यि युवतीको प्रेममा रहेछन् महानायक राजेश हमाल , यी महिलाले खोलिन यस्तो रहस्य
मेरी बास्सैकी ‘चम्सुरी’ को अस्पतालको शैयामा रुवाबासी, जीवन बचाईदिन अनुरोध भिडियो सहित
विगत ५ बर्षदेखि उपचार गराउँदै आएकी कलाकार पल्पसा डंगोललाई के भएको हो ?
हाँस्य कलाकार पल्पसा डंगोल ‘चम्सुरी’को दुबै कि’ड्नी फेल
आमा बितेपछि सेतै कपडामा भ्वाइसको स्टेजमा पुगेर सबैलाई रुवाए ट्याक्सी चालक कर्णले